Ragga'uu wixinee seeraa 'HR 128' fi deebii mootummaa Itoophiyaa - BBC News Afaan Oromoo
Ragga'uu wixinee seeraa 'HR 128' fi deebii mootummaa Itoophiyaa
Wixineen seeraa 'HR 128 ' jedhamuufi mootummaan Itoophiyaa mirgoota dimookraasii fi namoomaa akka kabaju dhibbaa irratti taasisuuf irratti kaayyeeffate kongirasii Ameerikaatti dhiyaatee sagaleen itti kennamuun Kibxata sa'aa booda darbeera.
Miseensi kongirasii wixinee labsii kana gara kongirasichaatti mariif fidan, Kiristoofar Ismiiz jedhamu.
Akka senaatarri kun jedhanitti, ''HR 128 kun sarbamni mirga namoomaa Itiyoophiyaa keessatti dhaabachuu akka qabu agarsiistuu ifa tahee fi barbaachisaadha. Mirgi namoomaa bu'uuraas lammiilee hundaaf eeggamuu qaba.''
Image Copyright @repdinatitus @repdinatitus
Namoota erga yaadni wixinee kanaa eegale ifaajaa jiran keessaa tokko, dura buutuu dhaabbata qindoomina Oromootaa mirga namoomaa fi Demookraasii, aadde Seenaa Jimjimoo ishee tokko.
Qabiyyee HR 128
Wixineen kun bara 2016 irraa kan eegale wayita tahu, qabiyyeen isaa keessaas:
Mirgi namaa akka eegamu, akkasumas mootummaan biyya bulchu uummata mara karaa demookraatawaa taheen akka bulchu gaafata.
Wixineen kun wayita bahutti Itiyoophiyaan Labsii Yeroo Muddamaa jala waan turteef, hatattamaan akka ka'u gaafata.
Akkasumas hidhamtoota siyaasaa, gaazexeessitootaafi rogeeyyii kumaatamaan lakkaa'aman mana hidhaa keessa jiran akka hiikaman.
Tarkaanfii humnaa humnoota nageenyaatiin fudhatamu akka dhaabbatu.
Bakka bu'aan Dhaabbata Mootummoota Gamtoomanii waa'ee mirga namoomaa Itoophiyaa keessa qorannoo bilisaa akka taasisu heyyamuu fi kanneen biroo.
Kana malees akka mootummaatti qofa osoo hintaane, namoonni balleessan dhuunfaatti akka seeratti dhihaatan gaafata.
Rogeeyyiin biyya alaa jiran hedduunis wixineen kun kongireesiitti dhiyaatee akka dabru taasisuuf yaaliiwwan garagaraa taasisaniiru.
Gama biraatiin ammoo, akka Aaddee Seenaan jettutti, amma duras wiixineen kun yeroo garagaraatti kongiresii Ameerikaaf dhiyaachuun, sagaleen akka kennamuuf taasifamu, mootummaan Itoophiyaa gidduu seenuun dhaabsisa jetti.
Kunis kan tahe mootummaan Itoophiyaa garee dhiibbaa taasisaniif (lobby) maallaqa guddaa kaffaluun akkasumas gama tika biyyaalessaa Ameerikaa waliin hojjechuun akka tahes himteetti.
Lammiileen biyya Ameerikaa jiraatan, bakka bu'oota isaaniitii bilbilaa fi imeeyilii fayyadamuun ergaa dabarfachaa turaniiru.
Hayyuu seeraa fi xiinxalaa siyaasaa kan tahan Dr. Tsaggayee Araarsaa gamasaaniitiin, labsiin kun ragga'uusaatti gammachuu qaban ibsanii, ''Mormii uummanni Oromoo fi biyyattii kaasaa turan waan keessatti hammateef, imumaayyuu hinturen jedha,'' jedhaniiru.
''Uummanni Oromoo gama dipploomaasii fi xiinsammuun mo'ateera,'' jedhan. Kunis qabsoon Oromoo deeggarsa idil addunyaa akka argate kan agarsiisu akka tahes dabaluun himaniiru.
Wixinee seeraa dirqisiisaa hintaane
Wixineen seeraa HR 128 kun akka seera biyya Ameerikaatti, dirqisiisoo kan hintaanedha (non binding).
Dr. Tsaggaayeen kanas wayita ibsan, ''Akka hojimaata seeraa baasuu biyya Ameerikaatti, manni maree bakka bu'oota uummataa (congress), seera tokko erga raggaasisee booda, gara qaama olaanaatti (senate) erguun isaanis ni raggaasisu,'' jedhu.Achii pireezidaantii biyyattii biratti dhiyeessuunis, erga mallattaa'ee booda, labsii tahee baha jechuudha. Ergasiis seera dirqisiisaa taha jechuudha.
Deebii Mootummaa Itoophiyaa
Ragga'uu wixinee seeraa kanaan booda Ministerri Dhimma Alaa Itoophiyaa ibsa baaseen, HR. 128 ragga'uun isaa michummaa Ameerikaa fi Itoophiyaan qaban kan faalleessudha. Yeroosaas kan hin eeggannee fi kan barbachisu mitis jedheera.
Wixinee seeraa kana kan deeggaran misensoonni kongiresiis, jijjiiramoota biyyattii keessatti ta'aa jiraniif beekamtii kennuu hin dandeenye jedhan.
Itoophiyaan walitti dhufeenya Ameerikaa waliin qabdu daran kan kabajju wayita tahu, wixineen seeraa kun birmadummaa biyyattii kan gadi qabudha jechuunis ibsichi ni eera.
Dhimma kanarrattis Dr. Tsaggayeen wayita dubbatan, ''walitti dhufeenyi biyyoota lamaanii kan baroota dheeraa lakkoofsisedha.'' jedhu. Jechi kunis gama mootummaa Itoophiyaatin doorsisa baramaa akka tahes dabaluun BBC'tti himaniiru.
Yoomii jalqabee hojiirra ooluu danda'a?
Akka hojimaata mana maree Ameerikaatti seeneetiin deeggaree, pireezidaantiin wayita raggaasisudha. Kunis kan irratti hundaa'u, sochii lammiileen Oromoo tahaniifi kanneen biroon dhiibbaa taasisaniin, jedhu Dr. Tsaggaayeen.